समाजवादी र राजपाबीच एक महिनाभित्र एकता गर्ने तयारी – Khabar Silo
समाजवादी र राजपाबीच एक महिनाभित्र एकता गर्ने तयारी
३० असोज, काठमाडौं । सत्ता साझेदार समाजवादी पार्टी (सपा) र विपक्षी राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बीचको पार्टी एकीकरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । एक महिनाभित्र एकता गर्ने तयारी भइहेको राजपा वार्ता समितिका संयोजक राजेन्द्र महतोले जानकारी दिए ।
राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्यसमेत रहेका संयोजक महतो पार्टी एकीरणका लागि सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको र केही प्राविधिक काम मात्रै बाँकी रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘एक महिनाभित्र एकता घोषणा गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ ।’
समाजवादी पार्टीका महासचिव गंगानारायण श्रेष्ठले पनि केही विषयमा निर्णय हुन बाँकी रहे पनि एकता अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँछन् । आफ्नो पार्टी पनि सकेसम्म छिटो एकता गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
नाम र चुनाव चिह्नमा लगभग सहमति
दुई पार्टीबीच एउटाको नाम र अर्कोको चुनाव चिह्न राख्ने विषय सहमति नजिक पुगेको वार्ता समितिका एक सदस्यले बताए । उनका अनुसार पार्टीको नाम समाजवादी पार्टी राख्ने र चुनाव चिह्न राजपाले प्रयोग गरेको छातालाई मान्ने सहमति भएको हो ।
तर, राजपाका कतिपय नेताहरू भने एकताको सन्देश पार्टीको नाममै झल्कियोस् भन्ने पक्षमा देखिन्छन् । ‘उहाँहरूले नाममा ‘जनता, एकिकृत वा संयुक्त’ थप्नुपर्नेमा जोड गरिरहनु भएको छ’ सपा वार्ता टोलीका एक सदस्यले भने ।
आगामी कात्तिकमा हुन लागेको उपनिर्वाचनमा सपाले पाँच औंलासहितको हत्केला चुनाव चिह्न पाएको छ । पहिला यो चुनाव चिह्न सद्भावना पार्टीको थियो ।
गजेन्द्रनारायण सिंहको सद्भावना ‘स्कुलिङ’बाट आएकाहरू राजपामा ठूलो संख्यामा छन् । राजपा गठन हुँदाका तीनवटा पार्टीको नाममा सद्भावना जोडिएको थियो ।
पाँच औंलासहितको हत्केला चिह्नमा पनि राजपाको खासै आपत्ती नरहने सपा महासचिव श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘नाम र चुनाव चिह्नका विषयमा प्रशस्त छलफल गर्न सकिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘तर नाम र चिह्न एकताको बाधक बन्दैन ।’
राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्रराय यादव पनि जनताको चाहना र तेस्रो वैकल्पिक शक्ति बनाउने अभियान अन्तर्गत एकता हुन लागेकाले ससाना प्राविधिक विषयमा अल्झिन नहुनेमा जोड दिन्छन् । छिट्टै एकता गर्नका लागि दुबै पक्षले केही न केही अडान छोड्नुपर्ने यादवको भनाई छ ।
नेतृत्व व्यवस्थापनको चुनौती
सपामा डा. बाबुराम भट्टराई संघीय परिषद् अध्यक्ष र उपेन्द्र यादव केन्द्रीय समिति अध्यक्ष छन् । ६ सदस्यीय राजपा अध्यक्ष मण्डलमा महन्थ ठाकुर संयोजक छन् ।
एकीकृत पार्टीमा भट्टराई, यादव र ठाकुर तीनै जनालाई अध्यक्ष बनाउने विषयमा वार्ता टोलीबीच अनौपचारिक छलफल चलिरहेको छ । राजपाका नेताहरूले भने यसलाई सपाको प्रस्ताव रुपमा मात्रै लिएका छन् ।
राजपाले अध्यक्ष मण्डलका सबै सदस्य र सपाका दुबै अध्यक्षलाई केन्द्रीय अध्यक्ष बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । यो प्रस्तावलाई सपा वार्ता टोलीले अस्विकार गर्‍यो ।
बहुअध्यक्षमा जाँदा दुबै पार्टीको समान नेतृत्व हुनुपर्ने राजपाको माग छ । राजपा अध्यक्ष मण्डलका एक सदस्य भन्छन्, ‘दुईबाट एक–एक वा दुई–दुई जना अध्यक्ष बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’
एउटा वा दुईवटा मात्रै अध्यक्ष बनाउने कुरामा सपाका नेताहरूको असहमति देखिन्छ । एकजना मात्रै अध्यक्ष बनाउँदा भट्टराई वा यादव कसलाई पठाउने भन्नेमा सपाभित्रै मतेक्य देखिँदैन । राजपामा भने एकल नेतृत्वका लागि असहमतिका बावजुद ठाकुरलाई अगाडि सार्न सकिने देखिन्छ ।
नेतृत्वको विभिन्न संरचनाको विषयमा छलफल चलिरहेको राजपा वार्ता टोलीका संयोजक महतो बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जुन संरचनामा गए पनि नेतृत्व बराबरीको आधारमा हुनुपर्छ ।’
सत्ता साझेदारीको समस्या
वार्ता टोली संयोजक महतो एकताअघि नै सपा सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने बताउँछन् । सत्तामा बसेर वैकल्पिक शक्ति नबन्ने उनको दाबी छ ।
संविधान संशोधन नभएपछि आफूहरूले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको स्मरण गर्दै महतोले भने, ‘हाम्रो लागि मात्रै होइन, दुई बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएपछि त सपा सरकारमा बस्नुको कुनै औचित्य छैन ।’
सपा महासचिव श्रेष्ठ आफ्नो पार्टी भित्रै सरकारमा बस्ने कि फिर्ता हुने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको बताउँछन् । संविधान संशोधन नहुँदा पनि सरकारमै बसिरहने कि बाहिरिने भन्ने विषय पार्टीमै छलफलमा रहेकाले एकतामा यसले पनि बाधा नपार्ने श्रेष्ठको भनाई छ ।
२८ कार्तिकमा बस्ने संघीय परिषद् र २९–३० कार्तिकमा बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकले सरकारमा बस्ने कि नबस्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने उनले जानकारी दिए ।
महाधिवेशन प्रभावित पार्ने षडयन्त्र !
गत बैशाखमा बसेको राजपा पदाधिकारी बैठकले कात्तिक अन्तिम साता महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा महाधिवेशन मूल तयारी समिति पनि गठन भयो । राजपाका कतिपय नेताहरू भने पूर्वनिर्धारित महाधिवेशन रोक्ने षडयन्त्र अन्तर्गत पार्टी एकताको कुरा आएको बताउँछन् ।
राजपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल भने मुद्दामा प्रतिवद्धता र जनाधार नभएकाहरूले पार्टी एकताको हल्ला फैलाइरहेको बताउँछन् । ‘पार्टीभित्र एकीकरण होइन, महाधिवेशनको माग भइरहेको छ’ लाल भन्छन्, ‘महाधिवेशन रोक्ने षडयन्त्र अन्तर्गत एकताको कुरा अघि सारिएको हो ।’
२०७४ बैशाखमा छ वटा मधेसवादी दल मिलेर गठन भएको राजपाको सांगठनिक प्रक्रिया अझै सकिएको छैन । २०७६ बैशाखमा संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्तिबीच एकता भएर गठन भएको सपाको पनि तल्लो तहसम्म एकीकरण भइसकेको छैन । पहिलाकै एकताले पूर्णता नपाई एकता गर्दा ‘भुँईको टिप्न खोज्दा खल्तीको पोखियो’ भन्ने उखानजस्तो हुन्छ भन्ने मत दुबै पार्टीमा देखिन्छ ।
राजपा वार्ताटोली संयोजक महतो भने महाधिवेशन वा सांगठनिक कुराले एकीकरणमा कुनै प्रभाव नपार्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘एकीकरण गरेर एकता महाधिवेशन गर्छौ ।’
काठमाडौं : नारायणहिटी संग्रहालयभित्रको लमजुङ कक्षलाई ड्रिङ्स र डिनरसहितको पार्टी गर्न मिल्ने गरी संरचना परिवर्तन गर्ने तयारी भएको छ। देशभरका ऐतिहासिक र पुरातात्तिक संग्रहालयलाई संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी लिएको संस्कृति मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतको पुरातत्व विभागको दशकौं लामो इतिहास बोकेको नारायणहिटी संग्रहालयलाई भाडामा दिने तयरी भएपछि कर्मचारीले आपत्ति जनाउन थालेका छन्। गएको असोज ३ गते संस्कृति तथा […]
नेपाल-भारतका सुरक्षाकर्मीद्बारा सीमा क्षेत्रमा संयुक्त गस्ती
कञ्चनपुर : सीमा क्षेत्रमा हुने अपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नका लागि कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रमा नेपाल भारतका सुरक्षाकर्मीले शनिबारदेखि दशगजा क्षेत्रमा संयुक्त गस्तीको कार्य शुरु गरेका छन्। तिहार लगायतको चाडपर्वलाई मध्यनजर गरी सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्तर र दुरुस्त पार्नका लागि संयुक्त गस्तीको कार्य शुरु गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलौरीका प्रहरी निरीक्षक रणबहादुर चन्दले बताए। प्रहरी निरीक्षक […]
आईएमईको डबल अफर योजनामा चितवनका भुवनले जिते एक लाख ७ हजार
साउदी । आईएमई रेमिटान्स कम्पनीले नेपालीहरुको महान चाड बडा दशै, तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गरी संचालन गरेको आईएमई डबलको डबल अफर योजना अन्तरगत चितवन माडीका भुवन अधिकारीले नगद एक लाख सात हजार १२ रुपैयाँ पुरस्कार जित्न सफल भएका छन्। साउदी अरबको पूर्वी साखा दम्मामको फउरी मनी ट्रान्सफरबाट रिया मार्फत नेपाल पैसा पठाउँदा गत साप्ताहिक […]
‘पति पत्नी और वो’ को धमाका
युएईका नेपाली श्रमिकको पारिश्रमिक बढाउने मन्त्री बिष्टको पहल